सरकारी वकिल कार्यालयले पनि लिएन जाहेरी : नेपालमाला
सरकारी वकिल कार्यालयले पनि लिएन जाहेरी
काठमाडौं : सांसद अपहरणको मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहल पुगेका जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु लामो समय विवाद गरेर फर्किएका छन्। वकिलको कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद रेग्मीले दुई घण्टा लामो वादविवादपछि पनि मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि समाजवादी पार्टीका नेताहरु आक्रोशित हुँदै फर्किएका हुन्।
आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ‘अपहरण’ सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि समाजवादी पार्टीका नेता मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए।
सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्धको मुद्दाको विषयमा छलफलका लागि पुगेका समाजवादी पार्टीका नेताले दर्ता गर्न वा फिर्ता गर्न माग गर्दै कार्यालय प्रमुख रेग्मीसँग लामो समय विवाद गरेका थिए।
कार्यालय प्रमुख रेग्मीले दुई घण्टाबढी समाजवादी पार्टीका नेताको चर्को दबाब सहदै मुद्दा दर्ता नगरेका हुन्। सरकारी वकिलको कार्यालयमासमेत अपहरणको मुद्दा दर्ता नभएपछि समाजवादी पार्टीका नेताले न्याय मरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेताहरुले वकिल कार्यालयका प्रमुख रेग्मीलाई पीडितले उजुरी दिँदा लिन्न भन्ने छुट कसैलाई नभएको भनेर दबाबसमेत दिएका थिए।
कार्यालय प्रमुख रेग्मीले नेताहरुलाई पटकपटक छलफल गरेर मात्र निवेदन लिने बताएपछि नेताहरुले उनलाई निवेदन पढ्ने समयसमेत दिएका थिए। पुनः रेग्मीले निवेदन छोडेर जान आग्रह गर्दा नेताहरुले दर्ता नहुने भए निवेदन नछोड्ने अडान लिए।
समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, राजेन्द्र श्रेष्ठसँगै अपहरित भनिएका सांसद. डा. सुरेन्द्र यादवसमेत वकिलको कार्यालय पुगेका थिए।
दुई सांसद र पूर्वआईजीपी खनालविरुद्ध असांसद यादवलाई अपहरण गरेको आरोप छ। समाजवादी पार्टीका नेताहरुले सांसद यादवलाई दुई सांसद र पूर्वआईजीपी खनालले वैशाख १० गते महोत्तरीबाट अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
वैशाख १० गते महोत्तरी पुगेर सांसदद्वय बस्नेत, श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी खनालले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास गरेको आरोप उनीहरुको छ।
पार्टी फुटाउने प्रयासस्वरुप उनीहरुले सांसद यादवलाई अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याएको उनीहरुको भनाइ छ। समाजवादी पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सांसद यादवको अपहरण गरेको दाबी समाजवादी पार्टीका नेताले गर्दै आएका छन् ।